KloiGoogle, ku xiro Google barnaamijka GIS - Geofumadas
KloiGoogle, xirmaan Google barnaamijka GIS aad
Juunyo, 2011 ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, Microstation-Bentley
Tani waa codsi ka baxsan fudud, laakiin ficil ahaan ayaa xalliya waxa aynu dhammaanteen rabno in ay noqdaan kuwo fudud sida:
Ka socdaa dhinacaan Google Maps ->
Lakabka lakabka sare Dhinacan barnaamijkayga GISArcGIS
Muddo yar ayaan u maleynayay inay ahayd wax la mid ah waxa uu sameeyo Plex.Earth oo leh AutoCAD, ma aha sida waxa AutoDesk Civil 3D uu sameeyo, mana lagu rakibay qalab Microstation V8i. Si ka duwan, tani ma keeneyso shay aan suurta gal ahayn in la cusbooneysiiyo, laakiin waxay kordhinaysaa adeegga iyadoo suurtogal ah in la cusbooneysiiyo hab cusub.
Fiiri, xaaladdan waxay ka dhigeysaa mid u dhigma habka aan ku leeyahay dhammaan qaybta hoose. Tani waxay ku dhowdahay sameynta shaashadda.
Laakiin marka la galo, sawirka waxaa lagu muujiyay sida xajmiga pixels ee ay qabteen kormeeraha xNUMX 1024.
Adigoo riixaya badhanka Google, waa la cusbooneysiiyay waxaana soo bandhigay muuqaal cusub sida haddii aan si toos ah ugu xirmay Khariidadaha Google.
Waxay si fudud u shaqeyneysaa. Waxa ay tahay waxa ay tahay in meel kasta oo loo diro, waxay xisaabinaysaa xariiqda sanduuqa, waxay tixgelinaysaa xalka ujeedada aan dooranay kadibna tagno ActiveX oo kor u qaadeysa Google Google oo keenaya sidii raster.
Miisaanka cabbirka ayaa leh fursado kala duwan, kiiskan waxaan ku tusayaa Microstation.
Fursadaha doorashooyinka, waxaad dooran kartaa aagga UTM ee aan ku shaqeyneyno.
Sidoo kale nooc ka mid ah soo dajinta, oo noqon kara image satellite, khariidado, khariidad iyo khariidado ballaadhan.
Waxay leedahay xulasho dheeraad ah, kaas oo si toos ah loo cusbooneysiin karo, aqoonsashada heerka Google ee habkeena. Markaas ka dibna dooran cabbirka qabashada ee pixels iyo dhamaadka badhanka magic ah ee cusbooneysiiya; iyada oo tani ay suurtagal tahay in la helo goobo muhiim ah haddii aan ku xirnahay Google Earth Pro ugu sareeyso oo ka dibna u keydso sida lakabyada gudaha.
Waxaa ugu fiican oo dhan, waxay la shaqaysaa ArcGIS, Mapinfo, GeoMedia iyo Microstation. Waxaan u maleynayaa in ay tahay xeelad isdhexgalka ee Google Earth. Ma jirto wax taageero ah oo loogu talagalay AutoCAD, waayo waxaad isticmaali kartaa Plex.Earth inkastoo ay ku ballanqaadeen inay sidaas sameeyaan mustaqbalka.
Waxaan xusuustaa markaan arkay dhalinyaradan deenishka ah inay wax ku muujiyaan Amsterdam sannadkii hore. Taas waxaan rajeynayaa inaan arko wax kale, maxaa yeelay marka laga reebo waxa aan soo bandhigay ayaa sidoo kale leh xalal kale oo xoogga saaraya GIS4mobile.
Post Previous«Previous Videos More for Civil 3D, AutoCAD iyo Revit Map
Post Next Muuji faylasha dhowaan dhow, Word iyo ExcelNext »
5 Jawaab in "KloiGoogle, ku xiro Google barnaamijka GIS"
DAVID TROCHE isagu wuxuu leeyahay:
Bogga waxaa kujira email-ka xiriirka. Lama soo degsan karo haddii aan la iibsan.
Sidee barnaamijka loo soo dejiyey?
Juun, 2011 at
Diido, ma shaqeynayo gvSIG
Marcelo isagu wuxuu leeyahay:
la shaqee gvsig?